MY FEELINGS: August 2007
Going back to Yangon
ဟုတ်ကဲ့ မောင်လင်းထက်ရန်ကုန်ပြန်ပါတော့မယ်။ မပြန်ရတာ တစ်နှစ်နီးနီး ရှိပြီပေါ့။ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ထားတာပါ။ အခု တတိယနှစ်ဝက်ဆိုတော့ တစ်နှစ်ရှိပြီ။ ဒီတစ်ခေါက် ပြန်တာက ၁၇ ရက်ပဲ ရှိမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မသွားခင် ဖိုင်နယ်ရီးယား ပရောဂျက်လုပ်မလို့။ ဟီး supervisor တွေကို တော့ မပြောရသေးဘူး ပြန်မယ်လို့။ သွားပြောရင် ပြန်ခိုင်းပါ့မလားမသိဘူး။ မပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရမှာပျော်ဆုံးပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒုတိယနှစ်ရဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကို တက်ကတည်းက မနားရသေးဘူး။ စိတ်ကောလူကောပင်ပန်းနေပြီ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်တာကို ရက်နည်းပေမယ့် meaningful ဖြစ်တဲ့အရာတွေ ပဲလုပ်ရမယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို ချရေးကြည့်လိုက်တယ်
1. ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက အဖေ၊အမေနဲ့ စကားတွေပြောရမယ်။(ဖားတာပေါ့ ဟီး)
2. ပြီးရင် ရွေတိဂုံဘုရားသွားဖူးရမယ်။(သာဓုခေါ်ကြနော်)
3. မုန့်ဟင်ခါးစားမယ်။ ဘယ်နားလဲတော့မသိဘူး။ မူလတန်းကျောင်းတည်းကမုန့်ဟင်ခါး။အရမ်းကောင်းတယ်။ပြန်လာမှာ လိပ်စာပြောပြမယ်
4. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မယ်။ စကားတွေပြောမယ်။ ပြီးရင်ဟိုငေးဒီငေးပေါ့ ဟီး
5. ၁၀တန်း ၉ တန်း ကျူရှင်ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့သွားတွေ့ရမယ်။ (ဟာ အခုမှသတိရတယ်။ သူတို့ အတွက် လက်ဆောင်တွေဝယ်ရဦးမယ်။)
6. သြော်မေ့လို့။ ကြေးအိုးသောက်မယ်။(ဈေးတော့ အရမ်းကြီးနေတယ်ပြောတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စားမှာပဲ)
7. ပြီးရင် လင်းထက်အကြိုက် ဆုံး အင်းစိန်မြို့သစ် က-၅ လမ်းထိပ်က ၀က်သားတုတ်ထိုးစားမယ်။(အင်းစိန်က ဟာဆိုလို့ အထင်မသေးနဲ့ အရမ်းကောင်းတယ်)
8. ပြီးရင် အဖေနဲ့ ဆိုက်ထဲ လိုက်ပြီး လေ့လာမယ်။(အဟီး သိပ်ကြိုးစားတယ်မထင်နဲ့ အဲ့ဒီလိုလိုက်မှ လိုချင်တာပူစာလို့ရမှာ)
9. အဲ့ လိုချင်တာဆိုလို့ တစ်မျိုးမထင်နဲ့။ ဘောလုံးကန်ဖိနပ်ကိုပြောတာ။ ဈေးသက်သာလို့။
10. အဲ အဖွားတွေကိုမေ့နေပြီ။သူတို့ကို သွားတွေ့ရမယ်။။ ပြီးရင် သူတို့ ကိုကန်တော့ရမယ်။
11. ပြီးရင် တခါတည်း အဖွားအိမ်နားက ဘဘနဲ့သွားပြီးစကားတွေပြောမယ်။ အဲ့ဒီဘဘ က ကျွန်တော် ရဲ့ကျေးဇူးရှင်။ အတိုင်ပင်ခံပေါ့။
12. ကျွန်တော် ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အ.ထ.က (၁) အင်းစိန်ကိုလည်း မေ့လို့မဖြစ်ဘူး။ သွားပြီး ကြည့်ရမယ်။ကျွန်တောတို့ ၉တန်း ၁၀တန်းတုန်းက ကျောင်းပြေးရင် ကျော်တဲ့ တံတိုင်းကြီး ကိုမြှင့်ထားပြီလားမသိဘူး။ သနားပါတယ် အခုတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကျော်လို့မရတော့ဘူး
13. နောက်ဆုံး လုပ်ချင်တဲ့ ဟာကတော့ ငပလီ ကမ်းခြေကိုသွားချင်တာပါ။ အရမ်းသာယာငြိမ်းချမ်းပြီး ကျွန်တော်သွားနေကြနေရာလေးပါ။ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အခုမိုးရာသီလေ တော်ကြာအပန်းမဖြေရဘဲ ရေနစ်ပြီးနေဦးမယ်
လောလောဆယ်စဉ်းစားလို့ရတာကတော့ ဒါပါပဲ။ နောက်စဉ်းစားလို့ရမှဆက်ရေးဦးမယ်။
Posted by JULYHTET at 8:38 AM2comments:
Posted by JULYHTET at 6:48 PM 1 comment:
မိန်းကလေးနှစ်ယောက် shopping centre သွားခြင်း
မိန်းကလေး ၂ယောက် shooping centre သွားတာကို အခြေခံပြီးရေးမယ့် ဟာလေးပါ။ ရှင်းအောင် မဖြူနဲ့ မနီ လို့ နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ မဖြူက ပိုက်ဆံအိတ် သွားဝယ်တယ် ထား။ မနီကတော့ ဖိနပ် သွားဝယ်တယ် ပေါ့နော်။
အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ပထမဆုံး ပိုက်ဆံအိတ် ဆိုင်ကို ၀င်သွားတယ်။
မဖြူ ။ ။ ဟဲ့ မနီ ငါ ဘယ်လို ပိုက်ဆံအိပ်ဝယ်ရင် ကောင်းမလဲ ဟင်။
မနီ ။ ။ ဒါလဲ လှတယ် ဟ။ (မနီက ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကို လက်ညိုး ထိုးလိုက်သည်)
မဖြူ ။ ။ ဟင် ဟုတ်လား။
မနီ ။ ။ အင်း။ (သူတို့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကြည့်နေရင်းမှ)
မနီ ။ ။ဟယ် မိဖြူ ဒီမှာလာကြည့်စမ်း။ ဒီဟာက ပိုလှတယ် ဟ
မဖြူ။ ။ အေး ဟုတ်တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အရောင် ကိုငါသိပ်မကြိုကဘူး
မနီ ။ ။အောင်မလေး ကောင်မရယ်။ အရောင် များရွေးလို့ ရပါတယ်
မနီ ။ ။ ရော့ရော့ ဒီအရောင်လေး ကောင်းတယ်
မဖြူ။ ။ အင်း မဆိုးဘူး။ ဟဲ့ နင်သေချာတယ်နော် ဒီအရောင်လှတာ။ ငါနဲ့ လိုက်ရဲ့လားကြည့်ပါဦး
မဖြူ။ ။ဒါဆို ငါယူလိုက်ပြီနော်
အဲ့ဒါနဲ့ ပဲ မဖြူတစ်ယောက် မနီ ကြိုက်သော ပိုက်ဆံအိပ်အား ၀ယ်လိုက်ပါသည်။
ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက် မနီဖိနပ် ၀ယ်ရန် ဖိနပ်ဆိုင်သို့ ၀င်သွားပါသည်။
မနီ။ ။ ဟယ် ဒီဖိနပ်လေး လှတယ်နော်။
မဖြူ။ ။အာ မလှပါဘူး နင်ကလဲ။ လာလာ ဒီမှာ လှတာ။တွေ့လား ဖဲပွင့်လေးနဲ့
မဖြူ။ ။သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအရောင်မယူနဲ့
မနီ။ ။ဒီအရောင်လေး လှပါတယ်ဟာ။ နင်ကလည်း
မဖြူ။ ။ မလှပါဘူး။ ဒီအရောင်ယူ။ အနီရောင်လေး ပိုလှပါတယ်။
မနီ။ ။နင်သေချာတယ်နော်။ ငါယူပြီနော်
အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆိုင်ထဲမှ ပြန်ထွက်လာကြပါသည်။
အပေါ်မှ စာများမှ ထူးခြားချက်ကို သင်တို့ တွေ့ပါသလား။ ကျွန်တော် တွေ့ပါသည်။ မဖြူဝယ်မယ့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို မဖြူက သူ့အကြိုက်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့ မနီ ကြိုက်တဲ့ ဟာဝယ်ပါသည်။ မနီကြတော့ကော။ မဖြူ ရွေးပေးတဲ့ ဟာကို အတင်းယူလာတယ်။သူကြိုက်မကြိုက်တော့ သူသာသိပါမည်။ ကျွန်တော်တွေးမိတာတစ်ခုကတော့ မိန်းကလေးများ တစ်ခုခုဝယ်ရင် အဲ့ဒီလိုပဲ သူများကိုမေးပြီး ၀ယ်ကြတယ်နဲ့တူတယ်။ သိသောမိန်းကလေးများ ၀င်ရောက် ရန်ဖြစ်… အဲ အဲ မှားကုန်ပြီ။ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်စေလိုသော အတွေးမရှိပါ။
Posted by JULYHTET at 7:01 AM3comments: